Ungaluthola Kanjani Usizo - IPrairie State Services Legal
Le nkinobho ethi “Faka isicelo ku-inthanethi” izokuqondisa kabusha kuwebhusayithi ye-Illinois Legal Aid, lapho iPrairie State isingatha uhlelo lwayo lokudla online.
Ukufinyelela kufayela lethu le- Iphrojekthi Yezindlu Ezifanele, shayela (855) FHP-PSLS / (855) 347-7757.
Ukufinyelela kufayela lethu le- Usizo Lwezomthetho Lomsebenzi Wabaninikhaya, shayela (888) 966-7757.
Ukufinyelela kufayela lethu le- Usizo Olusemthethweni Lomsebenzi Wabadala Abadala, shayela (888) 965-7757.
Ukufinyelela kufayela lethu le- Umtholampilo Wentela Ephansi, shayela (855) TAX-PSLS / (855) 829-7757.
Kuzo zonke ezinye izinhlelo, shayela ihhovisi langakini.
MAYELANA NOKUFAKA ISICELO
Bonke abafakizicelo bazobhekelwa ukufaneleka.
Umuntu odinga usizo lwezomthetho kumele afake isicelo ngaphandle uma engakwazi ukwenza lokho ngenxa yobudala noma ukukhubazeka.
Yiba namaphepha asenkantolo noma eminye imibhalo ebalulekile uma ufona.
Abahumushi bayatholakala mahhala uma kudingeka.
Ngenxa yezinsizakusebenza ezilinganiselwe, asikwazi ukusiza wonke umuntu. Ukuthola usizo olwengeziwe, vakashela ikhasi lethu lezinsizakusebenza ezingeziwe.
Ukufanelekela usizo oluvela ePrairie State Legal Services kuncike kulezi zinto ezilandelayo:
Uhlangana ne imihlahlandlela yemali engenayo neyempahla. Ngokuvamile, iklayenti liyafaneleka uma imali engenayo yomndeni ingaphansi kuka-125% wezinga lobuphofu, noma kufika ku-200% wezinga lobuphofu bombuso uma indlu inezindleko ezithile. Ezinye izibonelelo zisivumela ukuthi sikhonze amanye amaklayenti ngemali engenayo ephezulu kanye / noma nenqubo yefa.
Sine akukho kungqubuzana kwezintshisekelo maqondana nenkinga yakho yezomthetho.
Wena hlala endaweni yethu yesevisi, noma unenkinga yezomthetho kwesinye sezifunda ezisendaweni yethu yesevisi. Ukubona indawo yethu yesevisi, Chofoza lapha.
Uhlangabezana nalo ubuzwe noma izidingo zokufuduka esungulwe yiCongress. Abantu ababalekela udlame lwasekhaya noma ukushushumbisa bayafaneleka kungakhathalekile ukuthi bangabokufika kanjani ezindabeni zokubhekana nokuhlukunyezwa.
Uhulumeni imithethonqubo ayikuvimbeli Izinsizakalo Zezomthetho ZasePrairie ekusingatheni uhlobo lwenkinga yakho yezomthetho.
Unayo inkinga eyodwa noma eziningi zomthetho ezingaphansi kwezinhlelo zethu eziseqhulwini.